Chechina beta yeWOSOS 5.1, tvOS 12.1 ikozvino inowanika kune vanogadzira | Ndinobva mac
La 12.1th beta vhezheni yeIOS 5.1, watchOS 12.1 uye tvOS XNUMX ivo vatove vanowanikwa kune vanogadzira. Mune ino kesi, iyo nyowani vhezheni inowedzera bug fixes uye mhinduro kumatambudziko akaonekwa mune yapfuura beta, pamusoro pekuenderera mberi nekugadzirisa iyo group FaceTime mafoni ayo anotibvumidza isu kuti tifonere mumapoka evanhu makumi matatu nemaviri kana kuitiswa kwevanopfuura makumi manomwe. emojis nyowani ayo Ivo vaifanira kusvika mwedzi mishoma yapfuura uye ivo vanozopedzisira vapinda mune iyi nyowani vhezheni painoburitswa zviri pamutemo.
Pari zvino hapana chekutsvaga chero cheiyo macOS Mojave beta mune idzi nyowani beta vhezheni dzakaburitswa nguva yapfuura, uye zvinotarisirwa kuti inogona kusvika mangwana kune vanobvumidzwa vanogadzira. Zvichida mangwana isu tichaonawo yeruzhinji beta vhezheni yevamwe vashandisi vakanyoreswa muchirongwa che beta, saka Apple inoenderera mberi nemhando dzembeu kuvandudza mashandiro emasystem avo.
Iwo makuru matsva mune idzi nyowani beta shanduro ina dzevagadziri ndidzo zvakanangana nekuita uye mashandiro ehurongwa, saka usatarisira shanduko huru mavari futi. Zviripachena iwe unogara uchifanirwa kujekesa kana isu tichitaura nezve mashoma shanduko uye ndizvozvo ivo vanofunga nezve kudzikama uye vanosiya parutivi zvitsva zvekushandisa. Panyaya yenhau chero dzakakosha dzinoonekwa mune idzi beta 4, tichagovana nemi mose mune ino imwe nyaya kana isu tichagadzira imwe nyowani yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Chechina beta yeWOSOS 5.1, tvOS 12.1 ikozvino inowanika kune vanogadzira
Dhizaini yeiyo nyowani iPad Pro ye2018 yakafanana nezvatinazvo neMacBook Pro
Matatu achangoburwa maapps pane macOS Mojave dock